ब्रेक्सिट ब्रिटिश वित्तीय हृदयको लागी खराब छैन मार्टिन भिजल्याण्ड
घर » सामान्य » ब्रेक्सिट ब्रिटिश वित्तीय हृदयको लागि खराब छैन
मई 14 मा पोस्ट गरिएको, 2016 भित्र सामान्य, इतिहास |
हिजो हामीले एनओएस समाचारमा देखे कि ब्रेक्सिट (जुन ब्रिटिश द्वारा यूरोप बाट बाहिर निस्केको छ) ले लन्डनको आर्थिक मुटुको लागि गम्भीर वित्तीय परिणामहरू हुन सक्छ। यद्यपि, यदि हामी गम्भीरतापूर्वक खुसी गर्न सुरु गर्छौं भने यो पूर्ण बकवास हुन्छ, जुन वास्तवमा लन्डनको आर्थिक हृदय हो भन्ने कुरा हो। यो सबै हामीलाई भिटिक्ट र पुरातन मिस्रसम्म पुग्छ। तर तपाईं छोड्नु अघि, किनकि तपाईं ऐतिहासिक परेशानी जस्तो महसुस गर्नुहुन्न, यो जान्न उपयोगी हुन सक्छ कि लन्डनको वित्तीय हृदय एक स्वतन्त्र संस्था हो। यो राज्यभित्र एक राज्य हो। यो पनि वेटिकन सिटी र न्यू यर्कको कोलम्बिया जिल्लामा पनि लागू हुन्छ। यी तीन स्वतन्त्र राज्यहरूले युरोपबाट स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन्, अमेरिकाबाट स्वतन्त्रता र संसारभरि सबै चीजहरू मुक्त हुन्छन् (एकअर्काका लागि)। त्यसोभए तपाईं तुरुन्तै निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुनेछ कि मीडियाले के भन्छ, अर्थात् लन्डनको वित्तीय हृदय ब्रेक्सिटले नेतृत्व गर्नेछ, एक पूर्ण ग्याँस हो। वास्तवमा: यसले मात्र कुरा गर्दैन। वित्तीय लन्डनको दिल वास्तव मा दुनिया मा सबै वित्तीय गतिविधिहरु को पहिया मा इशारा गर्दछ। र यदि 1 च्यानल मार्फत कहीं कम पैसा प्रवाह हुन्छ, अर्को भाप अर्को च्यानल मार्फत प्रवाह हुनेछ। बायाँ वा दायाँ, लन्डन सिटी सधैँ जीतन्छ।
संसार कसरी बदल्छ भनेर बुझ्न, यो अझै इतिहासमा डुब्न उपयोगी छ। त्यसपछि हामी धेरै विशेष खोजहरू आइपुग्यौं। हामी पत्ता लगाउँछौं कि ब्रिटिश शाही परिवार हिब्रू फरुन रक्तलाइनहरूको सीधा सन्तान हुन्। उही अन्य शाही घरहरूमा लागू हुन्छ, यद्यपि सबै कुरा पूर्ण रूपमा पत्ता लगाउन सकिँदैन। त्यो सबै शासकहरू द्वारा इतिहास को झूठ र साथ चीज र नाम परिवर्तन जस्तै केहि गर्न को लागी। तथापि, के यो सावित हुनु पर्छ कि वेटिकन यी3स्वतन्त्र राज्यहरूमा केन्द्रीय भूमिका खेल्दछ र 2ले ब्रिटिश फनानी रानी एलिजाबेथ द्वितीयसँग 1 पेटमा हात राख्छ। हो, तपाईं सही हुनुहुन्छ: ब्रिटानियन फिरौन रानी एलिजाबेथ II। यो केहि होइन कि त्यो एक सिंहासन मा ताज गरिएको थियो जो कि याकूब को पत्थर मा मिनी पिरामिड चरणहरु मा सेट गरिएको थियो। पहिलो नजरमा, हामी सबैलाई थाहा छैन, जब सम्म हामी यो थाहा पाउनु भएको छ कि याकूब वास्तव मा मिस्र फार्न एमेनेमेथ आई को 1 जुडवां छोराहरु को2हो। वेटिकन फरौन को पुरातन पुजारी को रूप मा देख्न सकिन्छ र यसैले तपाईं एक साथ खेल सकते हो फिरऊन र उनका पुजारीहरू बीच। तपाईं पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि संसारका सबै सरकारी नेताहरू वास्तवमा फरार सन्तानहरू हुन् र सबै धार्मिक नेताहरू फिरऊन पुजारी सन्तान हुन्। जटिल छ? हो, तर जान्न महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले यसलाई गम्भीरतामा तल्लीन गर्न समस्या लिनुहोस्।
यस कुरालाई अझ राम्ररी बुझ्न, हामी पहिले इजरायल को इतिहास मा एक नजर राख्नु पर्छ। इजरायलको मूल नाउँ वास्तवमा कनान थियो र कनानीहरूद्वारा बसिरहेका थिए। यो वास्तवमा फिलीस्तीनी मानिसहरूका पुर्खाहरू हुन् जुन वर्तमानमा गाजा पट्टीमा रहेको कैदी र इजरायली राज्यद्वारा पश्चिम बैंकमा राखिएका छन्। 3500 वर्ष पहिले, 100 वर्षका लागि मिश्रमा शासन गर्ने सिमीय राजाहरूले कनान देशलाई उपयुक्त बनाउन मिश्रबाट बसाए। तिनीहरूले भूमिलाई इस्राएलको नाम दिए। मिश्रीहरूले यी निर्वासित सामीय जातिहरूलाई हबारू भनिन्, जसबाट हिब्रू शब्द व्युत्पन्न हुन्छ। 135 एनसीमा देश फिलीस्तीन को नाम र केवल 1948 मा, इजरायल को आजादी को युद्ध को नाम मा, नयाँ जीवन को नाम ले डेभीड बेन-गोरेयन। "यो सबै लन्डन शहर संग र ब्रिटिश शाही परिवार वा ब्रेक्सिट, व्रिजल्याण्ड संग के गर्नु पर्छ?"हो, यदि तपाईं धैर्य हुनुहुन्छ भने, यो रोचक हुनेछ।
बाइबलले हामीलाई इस्राएलीहरू मिश्रमा दासको रूपमा जीवन बिताउँछ भनेर सिकाउँछ। पुरातत्वविद्हरूले वास्तविकता पाएका छन् कि त्यस प्रभावलाई कुनै प्रमाण छैन। धोकाले मूसाको कथाको साथ शुरू हुन्छ जुन कथित रूपमा हिब्रू मानिसहरू मिस्रबाट बाहिर निस्कँदा समुद्रले आफ्नो जादुई कर्मचारीको साथ मार्गमा लैजान थाले। यो दृढ देखिन्छ कि बाइबिल क्यारेक्टरहरू मिस्र फरुनबाट व्युत्पन्न हुन्छन्। पुरातत्त्वज्ञहरूले पत्ता लगाए कि हिब्रूका मानिसहरू पड़ोसी देशका आप्रवासी अतिथि कर्मचारीहरूसँग काम गर्ने वर्गमा हुनेछन्। मिस्रको बौद्धिक आकस्मिक संग मिश्रण गरेर, तिनीहरू धीरे-धीरे मिश्रको भित्रमा सामाजिक सीढीमा उठ्थे। यो सबै अब्राहाम सुरु हुन्छ। उनी कनान (हालैको इजरायल) को उत्तर जन्मिएको थियो र उनीहरुका बहिनी सारासित विवाह गरेपछि अन्ततः मिस्रमा यात्रा गर्दा उनले सुन र चांदीको विनिमयदरमा आफ्नो दासलाई फलाममा दासत्व दिए। बदलामा, फरुन (परमेश्वरले) ले तिनको सन्तानको निम्ति उज्ज्वल भविष्यको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उनले पुरुष सन्तानलाई एक प्रकारको चिन्हको रूपमा खतना गर्न थाल्नुभयो (तलका वृत्तचित्र अनुसार)। वर्तमान फरौन Amenemeth थियो। म अमीमेथ नाम Amen को लागि खडा हुनेछ 'हेड' वा अमीन हो 'भगवान'। धार्मिक शब्द "ईन्म" यसबाट व्युत्पन्न भएको थियो, जसको साथ हरेक प्रार्थना पनि ईसाई संसारमा समाप्त हुन्छ।
थप स्पष्टीकरणका लागि वृत्तचित्र हेर्नुहोस्। मूलतया यो तथ्यलाई तल दिइन्छ, पुरातात्विक खोजहरु अनुसार, अब्राहाम को बाइबलीय व्यक्ति वास्तवमा भ्रष्टाचार (वा इतिहास को जानबूझने झूठाकरण) हो त्यस प्रचलित फरुन एमेनेमेथ आई। वृत्तचित्र को अनुसार, अब्राहाम र एमेनेमेथ दुवै मैले कहिल्यै पाएको छैन किनकी उनि "करारको सन्दूक", एक पोर्टेबल" तामा "यहूदीहरूलाई पवित्र। लामो कथा बनाउन को लागी: एनीमेमेथ म फरुमान अमीन रे को पूजा गर्नेछु। यो फेरि धेरै छलफल गरिएको शनि पूजाको सन्दर्भ हुन सक्छ, किनभने Ra शनिको लागि खडा छ। त्यसोभए के पनि प्रकट हुन्छ? उपासना मानव र विशेष गरी बाल बलिदानको साथ थियो।
यो अन्वेषण गर्ने सबै प्रयास किन? खैर, यो धेरै उत्खनन कार्य देखि देखिन्छ कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय यस "हिब्रू" फरुन एमेनेमेथ आई को सन्तान बनेको छ। यदि हामी पुरातात्विक र गोप्य समाजहरु को प्रतीकात्मक प्रतीत हुन्छौं, हामी देख्छौं कि मिस्र प्रतीक सधैं प्रकट हुन्छ। यो सुलझाउन समस्या लिनुहोस्। हामी पनि पूजा पूजा वा शनि वरपर हाम्रो वरिपरि पूजा गर्छौं। वेटिकन, लन्डन सिटी र वाशिंगटन डीसीमा कोलम्बिया जिल्लाको उपेक्षित संयुक्त राज्यहरूको केन्द्रीय बिन्दुहरूमा ओबालिसहरू फेरि मिस्र प्रतीकहरू छन्।
यदि तपाइँ साँच्चिकै तलका वृत्तचित्र हेर्न हेर्न समस्या पाउनुभयो भने, तपाईंले सबै चीज जडित गर्नुहुनेछ। प्रिंस विलियम एक इस्लामिक महिला संग सत्य छैन, तर सम्भवतः पुरातत्व निश्चित रूपले के भनिन्छ को लागी हेरौं र बोलेको छ र यसको बारेमा सबै कुरा गर्न को लागी गरौं। तल्लो रेखा यो हो कि फाऊन सन्तानका पावर संरचना धेरै तम्बूहरूको साथ ओक्टोपसको तुलनामा हुन सक्छ। यसको भाग धेरै अमीर परिवारहरू छन् जसले सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणालीसँग आफ्नो जेबमा रोकिच्चिल्ड्स, शिफ एन्ड वर्जबर्ग जस्ता माध्यमहरू छन्। केन्द्र सधैं अक्टोपस को टाउको हो र यो फरार सन्तानहरू (ब्रिटिश शाही परिवार र अन्य शाही घरहरू) र उनीहरूका फारु पुजारीका आदेशहरू (रोम, वेटिकन) हो। कि एक ब्रेक्सिटले लन्डनको शहरको आर्थिक समृद्धिमा केही प्रभाव पार्नेछ प्रश्नबाट बाहिर छ। बाँया वा दाँया, सबै ओक्टोपसको टाउकोमा दौड्छ। यी फरारहरू गर्दै छन् केवल एक मात्र समय र फेरि विभाजन र शासनको खेलको साथ। तिनीहरू युद्ध, संघर्ष र अशांतिको निर्माणमा बाँचिरहेका हुन्छन् र सधैंबाट लाभ उठाउँछन्। तिनीहरू आफ्नो ईश्वर राय, वा बरुको सम्मानमा युद्ध, डर र रगतको समयमा रिलीज हुने ऊर्जा प्रयोग गर्छन् शनि। तपाईंको अनुसन्धान गर्नुहोस्। यो एकदम गहिरो छ, तर धेरै सार्थक।
स्रोत लिङ्क सूची: wikipedia.org, wikipedia.org, beyondthematrix.nl
मार्टिन स्वतन्त्रता / मई 14, 2016
बोल्नुहोस् / मई 21, 2016
के सूर्य र अल शनि राई थिएन?
Is = चंद्र, Ra = सूर्य, एल = शनि।
वा मैले केहि सम्झना गरे?